Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii JOKA oo galay Maalintii 3xaad
Shirweynihii JOKA oo galay Maalintii 3xaad
Posted by ONA Admin	/ March 26, 2014
Shirweynaha 10aad ee Jaaliyadda Ogadeniya ee Dalka Koonfur Africa ayaa si habsami ah uga socda magaalada Port Elizabeth ee xarunta gobolka Eastern Cape halkaas oo uu shirku ka socdo maalintii Sedexaad.
Waxaa maalinta Sedexaad ee Shirweynaha Jaaliyadda lagu ansixiyay qodobo lagu kordhiyay xeer hoosaadka Jaaliyadda Iyo Hay’ada Sama Falka Iyo daryeeelka Iyo naafada Ogadeniya Hay’adaas ayaa ka hawlgali doonta Dalka Koonfur Africa iyada oo hoos imanaysa Jaaliyadda.
Shirka oo jawi dagan ku socday ayaa waxaa ka halday masuuliyiin badan oo ka tirsan Jaaliyadda ku waas oo ka mid ahaa ergooyinkii Shirka ee isaga kala yimid gobolada.
Shirka waxaa ka soo qayb galay Xubno ka tirsan Jabhadda ONLF waxayna ka warbixiyeen xaalada Ogadeniya Iyo xogaga Jabhadda ONLF xubanah ayaa sheegay in Halganka Ogadeniya gaadhay meel uuna ka soo laaban Karin islamarkaana tilmaamay xiligii la sameeyay Jabhadda ONLF Iyo maanta farqiga u dhexeeya.
Halkan ka daawo qaar kamid ah sawirada laga so dirayo hall-ka shirka uu ka socdo.
Shirka ayaa wali halkiisa ka sii socon doona ..